चौरी पालन व्यवसाय सङ्कटमा
पाँचथर, २६ माघ । जिल्लाको उत्तरपूर्वी सिदिन, प्राङबुङ, मेमेङ, च्याङथापु र फलैँचा गाविसमा भालु आतङकका कारण चौरी पालन व्यवसाय संकटमा पर्दै गएको छ । पर्याप्त जनशक्तिको अभाव र भालु आतङ्कका कारण पछिल्लो समय यो व्यवसाय धरासायी बन्दै गएको हो । गाउँका युवा वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेशिने प्रवृति बढेसँगै गोठमा बस्ने सहयोगि मान्छे पाउन मुश्किल भएको छ चौरी पालक कृषक बताउँछन् । चौरी चरन क्षेत्रमा भारततर्फबाट ठूलो सङ्ख्यामा भालु आएर चौरी खाइदिने क्रम बढेको सिदिन– २ का राजेन्द्र राईले बताउनुभयो । गत वर्ष मात्र भालुले एक दर्जन बढी चौरी खाइदिएको उहाँको भनाइ छ । एक दशक...
अमेरिकाले भन्सार छुट दिने तयारी सँगै नेपाली तयारी पोशाक उद्योग पुरानो अवस्थामा फर्कन सक्ने
अमेरिका, ८ फेब्रुवरी । हालसालै अमेरिकी सिनेट र काँग्रेस दुवै सदनबाट नेपाली तयारी पोशाकलाई कर छुटको रूपमा स्वीकृति प्रदान गर्ने विधेयक पारित भई राष्ट्रपति ओबामाको टेबलमा हस्ताक्षरको लागि पुगे पश्चात् नेपालमा लोपोन्मुख भएको तयारी पोशाक व्यवसाय पहिलेको अवस्थामा भन्दा राम्रों अवस्थामा पुग्ने सम्भावना देखिएकोछ । हाल प्रस्तावित विधेयक राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेको ३० दिन पश्चात् लागु हुनेछ । यो विधेयक लागु भएमा १९८० मा सुरु भएर २००५ मा मल्टी फाइबर एग्रिमेन्ट टर्मिनेट पश्चात् खस्केको नेपाली तयारी पोशाक व्यवसाय पुन २००२ भन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्कन सक्ने...
राउण्ड अन्नपूर्ण घुम्न आउनेमा तेस्रो मुलुकका पर्यटक बढी
मुस्ताङ, २४ माघ । विश्व प्रसिद्ध राउण्ड अन्नपूर्ण पदमार्ग घुम्न आउने पर्यटकमा तेस्रो मुलुकका नागरिक बढी रहेका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)ले दिएको तथ्याङ्कअनुसार, म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, कास्की र लमजुङ जिल्लाका ५७ गाविस फैलिएको पदमार्गमा सार्क राष्ट्रभन्दा तेस्रो मुलुककै नागरिक बढी देखिएको हो । सन् २०१५ मा ६९ हजार ९४ जना तेस्रो मुलुकका पर्यटक आउँदा १० हजार २२५ मात्रै सार्क राष्ट्रका पर्यटक भित्रिएका छन् । त्यस्तै सन् २०१४ मा एक लाख नौ हजार तेस्रो मुलुकबाट पर्यटक आएका थिए भने २० हजार २३३ सार्क राष्ट्रका रहेको एक्यापका केन्द्रीय...
‘अबको बीस वर्ष ऊर्जा उत्पादन दशक’
पोखरा, २१ माघ । उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले अबको दुई दशकलाई ऊर्जा उत्पादन दशकका रुपमा लिएर पहिलो दशकमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । रामबजारस्थित कालिका उमाविको स्वर्ण महोत्सव समापन समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै ऊर्जामन्त्री रायमाझीले देशलाई ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरेर अबको पाँच वर्षमा विद्युत् उत्पादन तीव्र गतिमा अघि बढाइने आश्वासन दिनुभयो । ‘घर घरमा बिजुली जनजनमा सेयर’ मूल नाराका साथ जलविद्युत्का बाँकी आयोजनालाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताउँदै उहाँले सरकार, निजी क्षेत्र र...
माथिल्लो मादी जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु, असार मसान्तभित्र काम सकिने
पोखरा, १२ माघ । कास्की जिल्लाको सिल्दुजुरे गाविसमा निर्माणाधीन माथिल्लो मादी जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु भएको छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दी र मधेसी मोर्चाको आन्दोलनले इन्धन तथा आयोजनालाई चाहिने अत्यावश्यक वस्तुको अभाव भएपछि असोजको पहिलो हप्तादेखि नै आयोजनाको सम्पूर्ण काम बन्द भएको थियो । आयोजनाका लागि इन्धनको सहज र बाहिरबाट मगाइएका उपकरण सीमा नाकाबाट आउन थालेपछि आयोजनाको काम सुरु भएको आयोजनाका संयोजक रामराज कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको सिफारिसमा नेपाल आयल निगम गगनगौडा डिपोले दैनिक एक हजार ५०० लिटर इन्धन उपलब्ध...
बङ्गलादेश एक्स्पोः निर्माणदेखि खाद्य सामग्रीसम्म
काठमाडौँ, ७ माघ । नेपाल र बङ्गलादेशबीचको व्यापार विस्तार गर्ने उद्देश्यले भृकुटीमण्डपमा आजदेखि बङ्गलादेश एक्स्पो २०१६ सुरु भएको छ । उक्त एक्स्पोको उद्घाटन गर्दै वाणिज्यमन्त्री दीपक बोहराले नेपाल बङ्गलादेशबीचको सम्बन्ध विस्तार, सहकार्य विस्तार र आगामी दिनको व्यावसायिक मार्गनिर्देशन समेत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री बोहराले सरकार व्यापार विस्तारका लागि उपयुक्त माध्यम पहिचान गरी त्यसलाई अघि सार्ने योजनामा रहेको बताउनुभयो । नेपालका लागि बङ्गलादेशी राजदूत मसफि बिन्ते साम्सले एक्स्पोले नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको पहुँच बङ्गलादेशसम्म र...
काठमाडौँ, ४ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको निर्यात व्यापार घट्दै गएको देखाएको छ । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको आर्थिक अवस्था आज सार्वजनिक गर्दै कुल वस्तु निर्यात २९.१ प्रतिशतले ह्रास आई रु २६ अर्ब १७ करोडमा सीमित भएको जनाएको छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि दक्षिणका भन्सार नाका बन्द भएका छन् भने गोरखा भूकम्पका कारण उत्तरतर्फको तातोपानी नाकासमेत अवरुद्ध भएका कारण निर्यात घटेको बैंकले उल्लेख गरेको हो । वस्तुगत आधारमा भारतर्फ जिङ्क, लत्ताकपडा, जुस, जिआइ पाइपलगायतका वस्तु र चीनतर्फ प्रशोधित छाला, चाउचाउ, तयारी पोसाकलगायतका वस्तु र अन्य मुलुकतर्फ दाल,...
सहभागिलाइ सीप प्रमाण पत्र
बनेपा-नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय व्यावसायिक शिक्षा तालिम अभिबृद्धि परियोजना अन्तर्गत नतिजामा आधारित तेस्रो समूहको पुष्पा टेक्निकल इन्स्टिच्यूट प्रालि. द्वारा निःशुल्क ३ महिना ३९० घण्टा कार्य अवधिको वनेपा केन्द्रमा संचालित होटल प्लम्बर र बेटर÷वेट्रेश तालिमका १२० जना प्रशिक्षार्थि सहभागिहरुलाई सि.टि.ई.भि.टि. को राष्ट्रिय सीप परिक्षण समिति द्वारा सीप परिक्षण गरि सफल राष्ट्रिय सीप प्रमाण पत्र र सीप परिचय पत्र एक कार्यक्रम विच वितरण गरिएको छ । पुष्पा टेक्निकल इन्स्टिच्यूट प्रालिका तालिम संयोजक अर्जुन प्रसाद सापकोटाको सभापतित्व र शान्ति जनआदर्श...
वोमी माइक्रोफाइनान्सको साधारणसभा सम्पन्न
काठमान्डौ, २ माघ । नौबिसे धादिंगमा मुख्य कार्यालय भएको वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको चौथो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरिएको छ । उक्त साधारण सभामा वित्तीय संस्थाले प्रस्ताव गरेको २० प्रतिशत बोनस शेयर तथा १.१०८ प्रतिशतले हुन आउने नगद लाभांश (कर प्रयोजनका लागि) स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै सभाले संस्थामा सर्वसाधारण तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तिन सञ्चालकहरु क्रमशः कृष्णराज सिलवाल, शिव प्रसाद मिश्र र कमला सापकोटालाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । साधारण सभामा विशेष प्रस्तावको रुपमा रहेको पूँजी बृद्धि सम्बन्धमा बोनस शेयर वितरण पश्चात हुन आउने शेयर...